ရောမမှာအီတလီပုံမှန်နံနက်စာ Absolut ခရီးသွား
maruuzen | 17/06/2021 22:07 | အဆင့်မြှင့်တင် 17/06/2021 23:09 | ရိုးမား
ဥရောပရှိအလှပဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုမှာရောမမြို့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသမိုင်း, အနုပညာနှင့် gastronomy အကြားအရာအားလုံးကိုအနည်းငယ်ပေါင်းစပ်။ မည်သည့်ခရီးသည်မဆိုနေထွက်ချိန်မှညဥ့်နက်ပိုင်းအထိပျော်သည်၊ ထို့ကြောင့်နံနက်စာကောင်းကောင်းဖြင့်တစ်နေ့တာကိုစတင်ရမည် ရောမမှာပုံမှန်နံနက်စာ.
ငါမနက်စာစားတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါခရီးသွားနေချိန်မှာသူတို့ဟာနေ့ကိုစတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ထပ်တိုးမှု၊ ဒေသခံအရသာတွေမြည်းစမ်းဖို့၊ ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာရဲ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုခံစားဖို့အခွင့်အရေးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောမမှာမနက်စာစားလို့ရတယ်?
အစားအစာအားလုံးသည်အံ့သြဖွယ်ရာအစားအစာရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောအီတလီနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်နံနက်စာကောင်းကောင်းဖြင့်တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်အခွင့်အရေးကိုယူကြစို့။ ရှင်းနေသည်မှာဘယ်တော့မျှမပျောက်ဆုံးသောဇာတ်ကောင်များမှာကော်ဖီဖြစ်သည်။ လူသုံးများသောအသုံးအများဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးမီနူးများတွင် pastry အချို့ရှိသည်။ ထို့နောက် ရောမမြို့ရှိပုံမှန်ရိုးရှင်းသောနံနက်စာမှာကော်ဖီနှင့် pastry ဖြစ်သည် အချို့သောထောပတ်သို့မဟုတ်ယိုနှင့်အတူ ဘီစကစ်မုန့် ဒါမှမဟုတ်ကွတ်ကီး။
ဤ menu ကိုရောမတို့၏အိမ်များသို့မဟုတ်စူပါမားကတ်များတွင်တွေ့လိမ့်မည် အပြင်ဘက်တွင်နံနက်စာစားခြင်း၊ ဘားတစ်ခုတွင်နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကတစ်နေ့တွင်သင်ဟိုတယ်နံနက်စာကိုကျော်ပြီးထွက်သွားပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရောမနံနက်စာကိုရှာဖွေသင့်သည်။ ဒီမှာဒီမှာကော်ဖီအကြောင်းနှင့်၎င်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ချိုသောအရာတစ်ခုခု - bomba, ciambella, maritozzo သို့မဟုတ် cornetto အကြောင်းပြောနေပြီးဖြစ်သည်။
ကော်ဖီနဲ့စကြရအောင် အီတလီလူမျိုးတွေကော်ဖီသောက်ကြတယ် ငါတို့လိုပဲနံနက်စာအတွက်အသုံးအများဆုံးရွေးချယ်မှုများမှာအနက်ရောင်ကော်ဖီ၊ cappucino၊ နို့နှင့်အတူကော်ဖီ၊ caffe lungo, caffe freddo, caffe al vetro ... အဘိဓာန်တစ်ခုလုံးရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးရှင်းပြရအောင်။ ရည်ရွယ်ချက်
ကော်ဖီ: ဒါကရိုးရိုး espresso ပါပဲ။ ၎င်းသည်ခွက်သေးငယ်။ အနည်းငယ်မျှသာပါရှိသည်။ သင်ကနို့သို့မဟုတ်သကြားအချို့ထည့်နိုင်သည်။
Macchiato ကော်ဖီ: ဒါကနို့တစ်စက်နဲ့ကော်ဖီပါ။
ကပ္ပီစီနို: ရေနွေးငွေ့ကြာပွတ်နို့နှင့်အတူကော်ဖီအလွန် creamy ။
latte macchiatoespresso ကော်ဖီပါသောနို့ရည်ရှည်ရှည်။
ကဖေး Lungoဖြေ - အဲဒါကို espresso cup မှာထည့်ပြီးရေနည်းနည်းပိုပူတဲ့ espresso ပါ။
ဤကော်ဖီအမျိုးအစားအားလုံးသည်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် espresso ကော်ဖီ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိလျှင်, သင်ပိုမိုရေလောင်းသောခွက်ကိုကြီးမားသော Americano မှာထားနိုင်ပါတယ်။
ကော်ဖီနှင့် ပတ်သက်၍ pastry ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျွန်တော်အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိသည်။ တစ်ခုက maritozzi ချိုသောတဆေးဖြစ်သည် သောရောမမြို့၏အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ္Legာရီအရမတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်အလယ်ခေတ်၌ချစ်သူအား maritozzo ပေးပြီးမုန့်၌ဝှက်ထားသောရတနာတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်စွပ်တစ်ချောင်းရှိရမည်ဟုဆိုထားသည်။
၎င်းသည်ကြီးမားသော်လည်းအလွန်ပေါ့ပါးသော Bun ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ကြာခဲသောမုန့်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အလွန်လေးလံသော? ၎င်းသည်ကော်ဖီနှင့်အတူလိုက်ပါ၊ သင်မျှဝေနိုင်သည်၊ စိတ်ကူးသည်အမြဲတမ်းကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ Il Maritozzaro, Roscioli Caffe သို့မဟုတ် Pasticceria Regoli မှာ maritozzi အရမ်းကောင်းတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော
နောက်ထပ်လူကြိုက်များနံနက်စာ Bun သည် ကွမ်းခြံကုန်း။ စင်စစ်အားဖြင့်ပုံမှန်နံနက်စာဖြစ်သောအီတလီနံနက်စာသည်ကော်တိုတိုပါသော cappucino ကော်ဖီဖြစ်သည်။
၏ဝမ်းကွဲ croissant ပြင်သစ် ဤမုန့်များကိုများသောအားဖြင့်ထောပတ်အစားရေနံဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ပျော့ပျောင်းသောအရသာရှိသည်။ တစ် ဦး က cornetto လာနိုင်ပါတယ် "ရိုးရှင်း" သို့မဟုတ်ဖြည့် ကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့်အတူ mermellata, ဒါမှမဟုတ်မုန့်။ သူတို့ကသင့်အတွက်အရမ်းလေးလွန်းလျှင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာများရှိသည် အရေးပါသော cornettos ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာ wholemeal ဂျုံမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပျားရည်နှင့်ပြည့်နေသည်။
အကောင်းဆုံးကော်နက်တိုကိုဘယ်မှာစားသလဲ။ ကောင်းပြီသင်ကော်ဖီသောက်ရန်နှင့်ကော်နက်တာကိုစားရန်ထိုင်နိုင်သည် ကော်ဖီ, Pizza del Risorgimento မှာ, ဒါမှမဟုတ်မှာ Pasticeria ဘာဘာနီ, Testaccio ရပ်ကွက်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာရဲ့ရှေ့မှောက်၌အတွက် ရထား Depot ။ ကော်ဖီမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ရောမမြို့မှာအကောင်းဆုံးမုန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် Panificio Bonci, Prati ၌တည်၏။
အကယ်၍ ရောမနံနက်စာတွင် Croissant ကဲ့သို့တစ်ခုခုရှိပြီးပြင်သစ်ကိုကျေနပ်မှုရစေပါက၎င်းသည် donut ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိပြီးအမေရိကန်များကိုဆွဲဆောင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် ချစ်သူ.
အဆိုပါဒိုးနတ်လိုပဲ, တကဖြစ်ပါတယ် ကြော်ပြီးသကြားဓာတ်ပါသောမုန့်စိမ်း ဒါကြောင့်သင်ကကိုက်တဲ့အခါအနည်းငယ် crunches နှင့်သင်၏ပါးစပ်သကြားလုံးနှင့်ပြည့်၏။ အကောင်းဆုံး ciambellas များကို Linari တွင်Vía Nicola Zabaglia (၉) နှစ်တွင်ရောင်းချသည်။
နံနက်စာစားရန်အတွက်ရောမမုန့်စားစရာတစ်မျိုးမှာအခြားဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ဗုံး, custard နှင့်ပြည့်စုံတစ် ဦး ပိုမိုပေါ့ပါးအရောင်ကြော် Bun ။
အချို့သောကော်ဖီဆိုင်များတွင် pastries များပါသောအခြားကျည်ဆန်များနှင့်အတူဤကမ်းလှမ်းမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရောမအလယ်၌ထိုသို့သောနေရာရှိသည် Roscioli ကော်ဖီဂျူးစုရုံးနှင့် Campo de'Fiori အကြားတည်ရှိသည်။ တစ်နေ့နံနက်စာစားရန်စျေးကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဒိန်းမတ်သို့မဟုတ် crostata၊ အရသာရှိသောပန်းသီးနှင့်ဗာဒံသီးတို့၏ချိုသောကိတ်မုန့်များ၏အရည်အသွေးကိုခံစားနိုင်သည်။
ဒါဝေးဒါချိုမြိန်သည်မဟုတ်လော ဒါကြောင့်သင်ဟာလိုချင်သူတစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ငန်သောအရာတစ်ခုခု သင်တစ် ဦး နှင့်အတူကော်ဖီအတူလိုက်ပါနိုင်ပါတယ် ရေနံချောင်း။ ၎င်းတို့သည်ဖြူသောပေါင်မုန့်အစအနများနှင့်မတူညီသောဖြည့်စွက်များဖြင့် mayonnaise ဖြစ်သည်။ သူတို့ကမကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကအရမ်းကြည့်ရှုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်သို့ခရီးထွက်ပြီးထိုအသားညှပ်ပေါင်မုန့်အမျိုးအစားကိုနှစ်သက်သည်ဆိုလျှင်ရောမမြို့သားများကသင့်ကိုစိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုစိတ်ထဲမှာထားပါ။
နောက်ဆုံးသင်လုပ်နိုင်သည် ချိုသောနှင့်ငန်ပေါင်းစပ် တစ်ဦး ပုံမှန် မနက်လည်စာနံနက်စာသို့မဟုတ်အစောပိုင်းနေ့လည်စာစားရန်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအမေရိကန်ထုံးစံတစ်ခုပါတကား!
သိသာတဲ့ မနက်လည်စာသည်သင်၏ပုံမှန်ရောမနံနက်စာမဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့်ထုံးစံတစ်ခုကတော့လူကြိုက်များလာပြီးမြို့ထဲမှာပုံမှန်နံနက်စာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်များအပြင်အခြားသူများကိုလည်းထောက်ပြပါ။
Marigold ရောမ, Via Giovanni da Empoli, 37) တွင်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ အော်ဂဲနစ်ဒိန်ချဉ်၊ pancakes, ဥနှင့်အများကြီးပို။ အထူးကော်ဖီနှင့်ရှည်လျားပြီးကြွယ်ဝသောလက်ဖက်ရည်စာရင်းကိုထည့်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောမနက်လည်စာရှိသည်။
Caffè Merendaရောမတွေကြားမှာလူကြိုက်များတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ပင်လယ်စာလှည့်စက်နဲ့လှည့်စားတဲ့အထူးကျွမ်းကျင်သူပါ။ အဆိုပါ brioche လည်းကောင်းသည်နှင့်၎င်းတို့၏အားလုံး pastry ထွက်ရပ်တည်။ ဒါဟာ Via Luigi Magrini,6ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်း: ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစာအာဟာရဖြစ်သည်။ နံနက်စာကိုလည်းစားသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖျော်ရည်၊ pancakes၊ ကြက်ဥနှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ Cornettos နှင့်ကော်ဖီတို့ရှိသည်။ Borgognona, 43-46 မှတစ်ဆင့်။
နီရို Vanigliaနံနက် ၆ နာရီဖွင့်သည်။ မီးဖိုချောင်အားလုံးနှင့်အတူခေတ်မီသောပုံစံရှိသည်။ အရာအားလုံးအိမ်လုပ်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည် Mignons ကွဲပြားခြားနားသောအရသာ mousses အတူ။ ဒါဟာ 201st Ostiense နှင့် Garbatella, Circonvallazione Ostiense, XNUMX အကြားဖြစ်ပါတယ်။
Coromandel ၎င်းသည် Piazza Navonna နှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအရသာရှိသောမုန့်ညက်များကိုလည်းလုပ်သည်။ ဒါဟာ Via di Monte Giordano 60/61 အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
မက်တ ဒီမှာသင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ် မင်္ဂလာပါ ရောမက သူတို့က၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည် ပုံမှန် Puglia နံနက်စာ သူတို့ကရောမမှာအကိုင်းအခက်သုံးခုရှိတဲ့ဒီစားနပ်ရိက္ခာကွင်းဆက်ရဲ့မီနူးမှာရှိတယ်။ တစ်ခုမှာ Piazza Bologna တွင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ Sallustiano တွင်ရှိပြီးနောက်တစ်ခုမှာအာဖရိကရပ်ကွက်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းအရသာရှိတဲ့ panzerotti နှင့် focaccias ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ Lorenzo il Magníficoမှ ၂၆ နှစ်၊ Via Venti Settembre၊ ၄၁ နှစ်နှင့်ဗီယာအီရီထရီးယား၊ ၁၀၈ နှစ်။
ဘား Benaco: ဤအရပ်သည်ကြီးမြတ်ရိုးရှင်းပြီးအရသာဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးအကောင်းဆုံးသောအရာသည်croရာဝတီမြစ်ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၃ နှစ်ရှိVía benaco တွင်ဖြစ်သည်။
ကော်ဖီဖြေ - ဘားမှာစားပွဲတစ်ခုမှာထိုင်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်တယ်။ scones အမျိုးမျိုးသည်ကြီးလှ၏။ ဝန်ထမ်းများသည်အလွန်ဂရုစိုက်ကြသည်။ ၎င်းသည်ဗာတီကန်နှင့်နီးစပ်သောကြောင့်အနီးအနား၌သင်၏ခရီးကိုစတင်ပါကကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ တနင်္လာနေ့မှတနင်္ဂနွေမှနံနက် ၇ နာရီမှညနေ ၉ နာရီအထိဖွင့်လှစ်ပါသည်။
Caffè Novecento ၎င်းတွင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခန်းနှင့်ရောမမြို့သားများစွာရှိပြီးစကားဝိုင်းပြောဆိုကြသည်။ မွန်းတည့်ချိန်အထိမနက်စာစားသည်။ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vecchio မှ ၁၂ နှစ်။
LI.BE.RA + မကြာမီ ဤသည်နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်ရှိသောစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ Pizza Navona နဲ့နီးပြီးအရမ်းအေးပါတယ်။ ဒါဟာ Via del Teatro Pace အသက် ၄၁ နှစ်ရှိပါပြီ။
စိန့် Eustachio il Caffè၎င်းသည် Pantheon ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိပြီး၎င်း၏ကော်ဖီကော်ဖီ၏ထူးချွန်မှုကြောင့်လူသိများသည်။ 82:7 pm မှပီဇာ di အက်စ် Eustachio, 30 ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ရောမမှာအီတလီအီတလီနံနက်စာ
အများကိန်းဖြစ်သည့် panini မဟုတ်ဘဲ panino သည်နံနက်စာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ခြင်းသည်မှားသည်။ အီတလီနံနက်စာတွင်ချိုသောအရာများသာရှိပြီးငန်သောအရာမရှိပါ။ မနက်စာကိုနာရီပေါင်းများစွာစားပြီးနံနက်လယ်၌ရေစာအဖြစ်ဆာလောင်နေသောသူများအတွက် panino ကိုအချိန်မရွေးရောင်းချသည်။
ကျေးဇူးတင်စကားပေးရန် smileys ဟုသူကပြောသည်
စုပြုံပြွတ်သိပ်လျက်နှင့် IKEA သည်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော Emoticons ကိုတင်ပြသည်
အတိအကျအတူတူ display ကို mode ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ
ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ကီးဘုတ်ရဲ့အောက်ခြေမှာသင်ကွဲပြားသောရုပ်ပြောင်ဆောင်ပုဒ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်
မင်းသုံးခဲ့တဲ့ ဒါ့အပြင်ရရှိနိုင် autocorrect, 30
အရေးအကြီးဆုံးသောဘာသာစကားများ၏အဘိဓါန်များ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကီးဘုတ် (မီနူး - ချိန်ညှိချက်များ - ဘာသာစကားနှင့်ကီးဘုတ်) တွင်သာရှိသည်
ကျေးဇူးတင်စကားပေးရန် Emoticons များကိုတုန့်ပြန်ပါ